नम्बरै नम्बर | SAHADEVISION
May 27, 2015 Blog/SlogSahadevision
जन्म देखिनै हामी विविध नम्बरहरू बोकेर हुर्किंछौँ, जस्तो कि आफू जन्मेको तिथि मितिको नम्बर। त्यसपछि जीवनका अरू थुप्रै नम्बरको परिबन्धमा हामी परिरहन्छौँ। धेरै नम्बरहरु मध्ये एस.एल. सी.को सिम्बोल नम्बर त् अझै पनि कतिलाई याद हुन सक्छ। तर, म यो लेखमा सम्झन नसके पनि थुप्रै पटक दोहोर्‍याई रहनुपर्ने केही यस्ता नम्बरहरुको बारेमा लेख्दैछु, जुन नम्बरहरुले अमेरिकामा हामी धेरैको परिचय बोकेको हुन्छ।
सुरु गरौँ पासपोर्ट नम्बरबाट। यो नम्बर भिसाको फारम भर्ने बेलामा दश चोटि चेक गरेर लेखिन्छ। भिसा दिएन भने यो मितिमा एम्बेसीले भिसा दिएन भनेर त्यो तिथीमिती बर्षौ वर्ष हाम्रो मानस पटलमा खेलिरहन्छ।
भिसा दियो भने त्यो मितिसँगै भिसा नम्बरले जीवनको अर्को बाटो तय गर्छ । त्यसपछि बिस्तारै अरू थुप्रै नम्बरहरुको ओइरो लाग्छ, जस्तै हवाई जहाजको टिकट नम्बर, फ्लाईट नम्बर, गेट नम्बर र सिट नम्बर। यो बिचमा आफू पुग्ने सहर वरपर बस्ने साथीभाइ आफन्तको फोन नम्बर र घर नम्बर कुनै सुरक्षित नोटमा बसिरहेको हुन्छ।
हवाई जहाजले जमिन टेक्नु अघि नै अब फेरि थुप्रै नम्बरहरु स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ आइ नाइन्टी फोर फारम भर्नको लागि। त्यस पछि प्राप्त हुने एलियन र आई नाईन्टी फोर नम्बरले जीवन भर पछ्याउने छ भनेर हामीले त्यतिखेर सोचेको पनि हुदैनौँ । त्यो फारम भर्ने बेलामा फेरि एकपटक पासपोर्ट, भिसा, घर, जरुरी फोन नम्बर आदीको पुर्नस्मरण गरिन्छ।
अब यताको माटो टेकीसकेपछि झनै थुप्रै नम्बरहरुले दिन दिनै घेर्न सुरू गर्छ। सुरू हुन्छ सोसियल सेक्युरिटी नम्बरबाट जुन एकदमै गोप्य राख्नुपर्छ भनेर सुनाईन्छ, ब्रतबन्ध गर्दा गुरुले सुनाएको गायत्री मन्त्र जस्तै।धेरै जसो महत्वपूर्ण कामहरू जस्तो कि स्कुलमा स्टुडेन्ट आईडीको रूपमा हाम्रो गायत्री मन्त्र कार्ड अर्थात् सोसियल सेक्युरिटीले आइडी नम्बरको काम गर्छ, त्यसै गरी बैक वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य जरुरी विषयमा जानकारी खोज्नुपर्यो भने पनि त्यही नम्बरको जरुरी पर्छ।
सोसियल सेक्युरिटी नम्बरसँगै अब स्टेट आइडी अर्थात् ड्राईभिङ्ग लाइसेन्स लिनुपर्छ,जसमा भएको नम्बरमा हाम्रो परिचय लुकेको हुन्छ । त्यही आइडीमा हुने आफू बसेको सडक नम्बर , घर नम्बर, अपार्टमेन्ट नम्बर, जिप कोड नम्बर एक एक सम्झनु पर्छ। यी विविध नम्बरहरुको भिडमा एउटा सानो नम्बर यता उता पर्‍यो भने कथाले अर्कै मोड लिन सक्छ जसरी फोन गर्दा एउटा नम्बर गल्ती भयो भने फोन अन्त कतै पुग्छ।
यसो भन्दै गर्दा फोन नम्बर बिना त जीवन कसरी सम्भव होला र लिनु परि हाल्यो तर रमाइलो यो डिजिटल युगमा धेरैलाई अरूको नम्बर त् के आफ्नै फोन नम्बर पनि याद हुँदैन।
अनि बैङ्क खाता खोल्दा फेरि नम्बर कै कुरो आउछ। फेरि पनि सोसियल सेक्युरिटी नम्बर, घर नम्बर आदिको प्रमाण बोकेर अरू थप नम्बर लिन्छौँ बैङ्कबाट। त्यसपछि आफ्नू वालेट थरीथरीका डेबिट र क्रेडीट कार्डको नम्बरहरुले भर्न खोज्छौँ । अनि जागिर खान जानुभो इम्पलोयी आई डी नम्बर, काम गर्ने कोठामा छिर्ने बेलामा ढोकाको साँचोको रूपमा काम गर्ने अर्को सेक्युरिटी कि नम्बर, कप्यूटरमा इन्टरनेट लग इन गर्ने पासवोर्ड नम्बर। आफू नियमित चड्ने बस वा ट्रेनको नम्बर, काममा पुग्ने स्टेसनको सडक नम्बर! खाना खान कुनै फास्टफुड रेस्टुरेन्टमा गयो भने पनि नम्बरको आधारमा खाना अर्डर गर्छौँ। अनलाइनमा केही सामान अर्डर गर्‍यो ,सामान कहाँ आइपुग्यो होला भनेर हेर्ने ट्रयाकिङ्ग नम्बर, अनि हप्ताभरी काम गरे पछि थापिने तलब पनि नम्बर मै आउछ। हरेक महिना तिरिने कोठा भाडा,अनेक थरी बिलहरु पनि नम्बर कै आधारमा तय हुने गर्छ।आफ्नै शरीरमा हेर्यौं भने पनि हाम्रो शरीर भरि पनि नम्बरै नम्बर छ। आफूले लगाउने लुगाको नम्बर, जुत्ताको नम्बर, शरीरको नाप तौलको नम्बर ओहो नम्बरै नम्बर। यदि यतै कतै मरियो भने पनि अस्पतालको कुनै कोठा नम्बरमा हामी लमतन्न पल्टिरहेकोहुने छौँ कुनै एउटा लास नम्बर बनेर र त्यो दिनको तिथिमिति हुने छ हाम्रो अर्को नम्बर जुन आफन्तहरुले सम्झने छन् सायद! र यसरी समग्रमा आँखा चिम्लेर सोच्यो भने जिन्दगी नम्बरै नम्बरले घेरिएको छ।
अन्त्यमा यहाँ खेलको रूपमा पनि नम्बर नै प्रयोग हुन्छ। नम्बरले नै कहिलेकाही हामीलाई लखपति वा करोडपति पनि बनाइदिन सक्छ । क्यासिनोमा जानुहोस वा अमेरिकाको धेरै जसो राज्यहरूमा नम्बरको खेल हुन्छ -लोटरी- मेगा मिलियन, लोटटो, पावर बल आदि खेल्नुहोस नम्बरै नम्बर । एक दुई डलरमा किन्न पाइने लोटटो खेलहरू खेलेर केही नेपालीहरूले पनि धनराशी जितेको खबर बेला बेलामा सुन्न पनि पाइन्छ।
आफ्नू जन्म मितिका नम्बर वा घर नम्बर , सोसियल सेक्युरिटीका नम्बर वा आफ्ना आफन्त वा पूर्व प्रेमिकाको जन्म दिनको नम्बर, वा फोन नम्बरकै केही अंक राखेर लोटरीको खेल खेल्दै आफ्नू नम्बर आयो कि भनेर लोटरी मेसिन अगाडी नम्बर जाँच गर्न आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेका धेरै भेट्छु म न्यु योर्कमा । के थाहा नम्बरै नम्बरको यो सहरमा मेरो पनि लक्की नम्बर आउछ कि कुनै दिन ?
पहिलो पटक सेतोपाटीमा प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख १०, २०७२ २०:२१:३१
← ए भुकम्प, तैले के खोजेको?	ऊ नेपाल फर्कँदै छ →
RT @LoudounLibrary: #InvadeLeesburg with your library card! In celebration of #GameofThrones Night, #Loudoun Library has partnered with 12…5hours ago
@deerauniyar @anilbaral @Kanchhu77 बधाँई छ है... यता #ThePalace निर्माण गर्दै, उता King जन्माउदै ...राजतन्त्र नै पो… twitter.com/i/web/status/1… 13 hours ago
कवितामा लय होस् लोकमा जय होस् मनमा कुनै भय नहोस्, जे होस् सुख शान्ति होस्, मिलन बिछोड त उकाली ओराली जस्तै हुन, तर ए… twitter.com/i/web/status/1… 16 hours ago